Mitovy amin’izany ny androntsika. Fony misiônera izahay sy ny Loholona David A. Bednar 40 taona lasa eo ho eo izay (mampanantena anareo aho fa tsy izahay no misiônera niverina antitra indrindra mipetraka eto amin’ny seza menamena), dia nisy misiônera 16.000 tamin’izany. Araka ny tatitra nomen’ny Filoha Thomas S. Monson omaly dia manana misiônera 65.000—betsaka noho ny hatrizay, isika ankehitriny. Nisy tsatòka 562 tamin’izany. Mihoatra ny 3.000 izany ankehitriny.